REPUBLICADAINIK | कांग्रेसकाे उत्सव शुरू भयाे, सहमतिबाट अगाडि बढ्छाैंः विश्वप्रकाश शर्मा - REPUBLICADAINIK
नेपाली कांग्रेसको विवाद समाधानको बाटोमा छ । केही मिल्न बाँकी विषयलाई २–४ दिनमा समाधान गरिनेछ । तीन हप्तासम्म कांग्रेसभित्र ठूलो संकेट मडारिएको थियो । सोमबारको बैठकपछि अधिकांश विवादहरू समाधान भएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग हाम्रा सहकर्मीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाविधेशन एकतावद्ध ढंगले सम्पन्न गर्ने गरी सम्वादबाट सहमति र सहमतिबाट महाधिवेशन गर्ने स्प्रीटमा हामीले आन्तरिक विषयहरूलाई हल गरेका छौँ । कांग्रेसकाे उत्सव शुरू भयाे ।
कात्तिकको १६ गते नेपाली कांग्रेसको गाउँ र नगरको वडा अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि २–३ वटा चरणहरू छन् । माघ महिनाभित्र आन्तरिक संरचना समायोजन गर्ने । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणको प्रक्रिया शुरु हुुनुपर्छ । पहिला वडामा कात्तिक १६, ०७६ मा वडा नगरको अधिवेशन गर्नु अगाडि पहिला माघमा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुनुपर्छ ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नलाई नवीकरण गर्ने र कार्य गर्नको लागि हामीले ०७६ फागुनदेखि ०७६ सालको चैत महिनासम्म २ महिनाको समय राखेका छौँ । क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन गरेर केन्द्रमा पठाउनेछ । सूची पठाउने कार्य ०७७ सालको वैशाखमा पुर्‍याएका छौँ । क्रियाशील सदस्यता छानविन गर्न वैशाख १५ गते ०७७ सम्म पुर्‍याएका छौँ । समग्रमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नामावली अन्तिम बनाउने कुरो ०७७ सालको साउनको मसान्तभित्र तोकिएको छ ।
देशभरिका ७ हजारभन्दा बढी वडाहरूको एकै दिन वडा अधिवेशन ०७७ कात्तिक १६ गते हुन्छ । त्यसको २ दिन पछाडि ७ सय ५३ वडा गाउँ र नगरको अधिवेशन ०७७ कात्तिक १८ गते हुन्छ । ३ सय ३० वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन कात्तिक २१ गते ०७७ मा अधिवेशन हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ । एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा भएको जिल्लामा अधिवेशन कात्तिक २३ गते ०७७ मा हुनेछ ।
त्यसपछि एउटाभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन कात्तिक २५ गते ०७७ सालमा हुनेछ । त्यसपछि सात वटा प्रदेश अधिवेशन एकै दिन ०७७ सालको मंसिर २९ गते हुनेछ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाविधेशन ०७७ साल फागुन महिनाको ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा हुनेछ ।
केन्द्रीय महाधिवेशन अहिले निर्धारित गरिएको समय पछाडिको लागि निर्धारित मिति फागुन ७, ८, ९ र १० यथावत नै छ । त्योभन्दा अगाडि सारिएको जुन मिति छ, त्यो सारिए बमोजिम तीब्रताका साथ काम गर्नुपर्ने चुनौती, दायित्व हामी सबैमा थपिएको छ । मुख्य रुपमा महाधिवेशनको कार्यतालिकामा के कति परिमार्जन भयो ? के कति संशोधन भयो त्यो मुख्य कुरा होइन ।
मुख्य कुरा महाधिवेशनको निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्दै गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र अल्पमत र बहुमतमा निर्णय गर्नुपर्ने आवस्था आएको थियो । कोही सहभागी हुने । कसैले बहिस्कार गर्ने खालको चित्र देखिएको थियो । अहिले के भयोभन्दा सभापतिजीले वरिष्ठ नेतादेखि अरु सबै नेताहरूको साझा सहभागिता, साझा स्वामित्वका साथ निर्णयहरू गर्नुभएको छ । त्यसले के भयो भने यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अझ बढी हार्दिकता, अझ बढी तीब्रताका लागि सहज बनायो ।
हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धी कार्यतालिका र प्रक्रियाको विषयमा हामी एउटा ठाउँमा पुग्यौँ । त्यो विषयमा पुग्दै गर्दा केवल कार्यतालिकाको हेरफेर मात्रै भएको होइन । हामीले समयमा नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४, त्यसको ८ को ‘ङ’ले के भन्छ भने क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समिति बनाउन भन्छ । यसको लागि पनि विधानको धारा २२ को ७ बमोजिम सात सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गरेपछि त्योसँगै समिति विधानको धारा ४ को ८ को ‘घ’ र ‘ङ’को बमोजिम कार्य गर्नुपर्छ । यो गर्नको लागि पार्टी सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अधिकार दिएको छ ।
संयोजक र सदस्यहरूको मनोनयन आवश्यक परामर्श गरेर गर्ने भनेर सहमति भएको छ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने हामी अलिक अगाडिको बैठकमा जाँदै गर्दा सभापतिलाई अधिकार दिँदै गर्दा पनि शंका, उपशंका रह्यो होला । सर्वसम्मति र बहुमतले निर्णय गर्दा त्यसमा पनि विमती रह्यो होला । अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भने क्रियाशील सदस्यता छानविनको सन्दर्भमा सभापतिले परामर्श गरेर संयोजक र सदस्यहरू मनोनयन गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ ।
यसले के बताउँछ भने हाम्रा वीचमा विश्वास पहिलाभन्दा बढेर गएको छ । विश्वा बढेर गएको बेला नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), तरुण दल, विभागहरूको विषय विश्वासको जगमा हामी क्रमशः समाधान गर्दै लैजान्छौं । माघ २३ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक निर्धारण गरेका छौँ । त्यो निर्धारण गरेको बैठकमा विधानको केही धाराहरू, केही नियमावलीहरूका सम्बन्धमा हामीले निर्णयहरू गर्नुछ । पार्टीका अन्य भ्रातृ संघ संगठनहरू तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको बारेमा पनि निर्णयहरू गर्ने क्रममा हामी जान्छौँ ।
विद्यार्थीका वीचमा सोमबार जे भएको छ भएको भन्दा धेरै पनि बाहिर पुगेको हुन सक्छ । विद्यार्थीका वीचमा त्यति मात्रै पनि हुनुहुन्न थियो भन्ने हाम्रो भावना छ । विद्यार्थीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन पाउने, शान्तिपूर्ण अनसन बस्न पाउने, एउटाले अर्काको विचारलाई सुन्ने, यो स्वभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर, त्यही बिचार प्रकट गर्दै गर्दा एउटाले अर्कोको कुरा सुन्दै गर्दा, एउटाले अर्कोलाई ग्राह्य हुने मनोविज्ञान भएन भने राम्रो हुँदैन ।
पार्टीमा यो बेला देशभरिका नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीले पनि जो अहिले आवाजहरू सुनिरहनुभएको छ । उहाँहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्ने कुरा के छ भने हामीलाई चिन्ता थियो तपाईहरू सबैलाई, विद्यार्थीहरूलाई पनि, पार्टीका अरुलाई पनि, कि पार्टीमा नेताहरूको वीचमा द्वन्द्व भयो । त्यो द्वन्द्वको कारणले धेरै विषयहरूमा समस्या भयो भन्ने चिन्ता थियो । पार्टीमा नेताहरू एक भएर अगाडि बढ्नुस् भनेर हामी साथमा छौँ भनि आउँथ्यौँ ।
आज नेताहरू एककिसिमको सहमतिको ढंगले एकठाउँमा पुग्नुभयो । नेविसंघबाट उत्पादित नेताहरू अहिले पार्टीको नेतृत्वमा वर्तमान पार्टी सभापति चाहे त्यो वरिष्ठ नेता, अन्य मुख्य नेताहरू नेविसंघबाटै उत्पादित नेताहरू हुनुहुन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघको भविष्यको बारेमा, दायित्वको बारेमा, नेविसंघलाई जीवन्त तुल्याउने सन्दर्भमा सबैले गम्भीर हेक्का राख्नु हुन्छ । राख्ने भएको हुँदा नेविसंघका नेताहरूले पनि यो प्रकारको वा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व हुनेभन्दा पहिला पार्टीले उचित निर्णय गर्नेछ । विधानको प्रक्रियाभित्र बसेर निर्णय गर्नेछ । नेविसंघका साथीहरू र नेविसंघको भविष्यलाई जीवन्तता दिने गरी निर्णय गर्नेछ भन्ने आशावादी रहेर बस्नुस् ।
१२औँ महाधिवेशनबाट आउने समिति भन्नु र १२औँ महाधिवेशन गराउने समिति भन्नुको विषयमा फरक छ । सम्भव भए त अहिले पनि नेविसंघको नेतृत्वमा ३२ माथि किन ? त्योभन्दा मुनि बनाए हुन्छ । २८, २९ ३२ बनाए हुन्छ । त्यो बनाउने कुरालाई विधानले रोक्दैन । तर, सँगैमा विधानले के पनि रोक्दैन भने १२औँ महाधिवेशनको धारा उपधारले के भन्छ भने १२औँ महाधिवेशनमा लागू हुन्छ । अर्थात १२औँ महाधिवेशनबाट आउने समितिमा यो कार्य लागू हुँदै गर्दाखेरी त्यसलाई अगाडि लागू गर्न छेकिदैन । त्यो त अगाडिको ३२ वर्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्‍यो भने अधिवेशन गराउने समिति हो । यो त पार्टीले जिम्मेवारी लिएको अवस्था हो । पार्टीले गराउँदै गर्दा कुन रुपमा उपयुक्त छ ? पार्टीको सबै नेताहरूको साझा सहमतिको साथ यसमा हामी निर्णयमा पुग्छौँ ।
नेपाली कांग्रेसले एमसीसी परियोजना आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बेलामा गरेको सम्झौता हो र, अहिलेसम्म नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्झौता हो । एमसीसीलाई हेर्दै गर्दाखेरी सन् २००४ मा शुरु भएको थियो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि आईपीएस (ईण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी)सँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । यदि नेपाललाई भारत, चीन, अमेरिकाले वा कुनै पनि देशले दिँदै गरेको सैन्य सहयोग लिखित रुपमा कागजमा सैन्य रणनीतिको हिसाब हुनुपर्नेछ नेपाल भनेर कहिँ लेखिएको छ भने सबै खालका सहयोगहरू अस्वीकार गरौँ । तर, अमेरिकाबाट एम १६ नाम गरेको हतियार पैसा तिरेर खरिद गर्छौं ।
निःशुल्क रुपमा नेपालका लागि केका लागि भने स्पष्ट लेखिएको छ, विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनको लागि सडकहरू कालोपत्रे बनाउनको लागि भनेर आएको सहयोग नलिने कर्म हुँदैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा पुस्ताले अरुण तेस्रो परियोजनाको हत्या गरेको थियो । त्यो पुस्ताले त्यसको दश वर्ष पछाडि आफ्ना युवाहरूलाई लोडसेडिङका विरुद्ध जुलुस निकाल भन्यो । पहिला विजुली उत्पादनमा रोकाउने, बाहिरको सहयोग । त्यसपछि दश वर्ष पछाडि विजुली ननिक्लिकन लोडसेडिङ भयो भने जुलुस निकाल्न लगाउने ।
त्यसको १५ वर्ष पछाडि के भयो भने त्यही अरुण तेस्रो परियोजनाको आफ्नै हातले शिलान्यास गर्ने । यस्तो कर्म विगतमा भए जस्तै एमसीसीको सन्दर्भमा त्यस्तो खालको अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यदि कसैले पनि बाहिरबाट दिँदै गरेको सहयोगमा सैन्य रणनीतिको कुरा छ भने अध्ययन गरौँ, हेरौँ, त्यस्ता बुँदाहरू छन् भने हटाऔँ । छैनन् भने जबरजस्ती रुपमा ‘छन्’ भनेर राष्ट्रवादी एकदम बन्नका लागि अतिरञ्जितपूर्ण ढंगले विषयलाई लिएर जाने कर्म गर्नु हुँदैन ।
बिल्कुलै मागेका छैनौँ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम फरक राजनीतिक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ भनेर भनेको हो । फरक दल र फरक लिंग हुनुपर्छ भनेको हो । त्यो हुँदै छ । सातै वटा प्रदेशमा पनि फरक दलका छैनन् ।
एउटै दलले बाँडेर लिएको अवस्था छ । केन्द्रको नजिरलाई मानेर अब प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको बन्नुपर्छ । कांग्रेसले मागेको छैन । संसद सहज रुपमा अगाडि बढ्दै गर्दा साझा दायित्व र साझा बोधका साथ जाओस् भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ । हामीले निवेदन राखेर उपसभामुख पद मागेका छैनौँ ।
Published : Monday, 2020 February 3, 11:47 am